संसद् पुर्नस्थापना भए प्रचण्ड र नेपाल हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न निस्कनेछन्ः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुर्नस्थापना भए भइहाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न निस्कने बताएका छन् । मंगलबार आफू निकटका युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकको प्रथम पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दैं ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुर्नस्थापना भए प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् । बरु उनीहरु हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिड्ने बताएका छन् । ‘पुर्नस्थापना भयो भने यहाँ के हुन्छ भन्दा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ। कहिले यसो उत्तरतिर, कहिले यसो दक्षिणतिर लाग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइदिनुस् न त्यति मानिदिनुस् न भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुनै चान्स छ ? कुनै सम्भावना छ प्रधानमन्त्री हुने ? एकभन्दा पनि तल तल प्रतिशत छैन उहाँहरूको सम्भावना। लडाइँ जित्नुभयो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्छ। खोज्दै हिँडेर अन्तिममा मैकहाँ आइपुग्न बेर लगाउनुहुन्न।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–माधव नेपाल बहुमत भएको पार्टी फुटाउने, आफ्नै प्रधानमन्त्री हटाउने र अर्को प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्ने खेलमा लागेको भन्दै ओलीले भने, ‘त्यस्तो अस्थिरतातिर अदालतले जान दिन्छ होला भनेर म कसरी विश्वास गरुँ ?’
संसद् विघटनको बचाउ गर्दै उनले संविधान, संसदीय व्यवस्था र अभ्यासले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने वातावरण रहेन भने संसद विघटन गर्न सक्ने बताए ।
उनले समयमा चुनाव हुने भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरेका छन् । सूर्य चिह्न समेत आफूहरुकै हुने ओलीले बताएका छन् ।
त्यस्तै, सोही कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संसद् पुर्नस्थापना भए केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको मुद्दाको फैसला गर्ने समय नजिकिरहेको बेला रायमाझीले संसद् पुर्नस्थापना भए ओलीले नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने जिकिर गरेका हुन् । आफूहरुले ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने माहोल बनाउने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री रायमाझीले संसद् पुर्नस्थापनाको कुरा गरेर जनतामा विश्वास नगर्नु यथास्थितिवादी, प्रतिगामी चिन्तन भएको बताए । मन्त्री रायमाझीले संसद् विघटन अग्रगामी र प्रगतिशील कदम भएको भन्दै संसद् पुर्नस्थापित हुने सम्भावना ९९.९ प्रतिशत नरहेको धारणा राखे । संसद् पुर्नस्थापना भए पनि आकाश खस्छ, पृथ्वी भासिन्छ ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।
उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नसच्चिए अब प्रधानमन्त्री नै नबन्ने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, रायमाझीले जनताप्रति विश्वास नभएर नेपाली कांग्रेस ढुलमुल भइरहेको आरोप लगाए ।